ညတရေးနိုးဗိုက်ဆာလို့ ရေခဲသေတ္တာထဲရှိတာလေးနဲ့ပဲ တစ်ခုခုလုပ်စားမလား?
တစ်ခါတစ်လေ ထမင်းမစားချင်လို့ ဘိုစာလေးစားပြီး ဗိုက်ဖြည့်မလား?
ကဲလွယ်ပါတယ် ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ချိန် မိနစ်၂၀သာကြာမယ့် အမေရိကန်စတိုင် Club Sandwich လေးနဲ့ ခုနကအခက်အခဲတေ
Bacon(အသားပြား) = ၄ပြား
ပေါင်မုန့်အဖြူ = ၃ချပ်
Mayonnaise = လ္ဘက်ရည်ဇွန်း၁ဇွန်း
ကြက်ဥကြော်/ပြုတ် = တစ်လုံး
ခရမ်းချဉ်သီး = အလုံးကြီးတစ်လုံး
ကြက်ရင်ဖုံ = အသားပြားအချို့
ဆလပ်ရွက် = အနည်းငယ်
ချိစ်ပြား = တစ်ပြား
Tomato catchup အနည်းငယ်တို့လိုအပ်ပါတယ်။
Bacon ကိုကြော်ပါ။ဟိုဘက်ဒီဘက်လှန်၍ ကြွပ်ရွလာသည်အထိကြော်ပေးပါ။
ပေါင်မုန့်ကိုမီးကင်ပေးထားပါ။ မီးကင်ပြီးလျှင် ပေါင်မုန့်တစ်ဖက်စီကို Mayonnaise သုပ်ပါ။
ပေါင်မုန့်ပေါ်မှာကြက်ဥကြော်၊ခရမ်းချဉ်သီး၊Bacon ထပ်ပါ။ပြီးရင်အပေါ်မှ နောက်ထပ်ပေါင်မုန့်တစ်ချပ်ထပ်အုပ်ပါ။
နောက်ဆုံးတွင်မီးကင်ထားသောပေါင်မုန့်ထပ်တင်ပြီး အဆာပလာများမထွက်စေရန်သွားကြားထိုးတံဖြင့်ထိနိးထားပါ။မိမိစိတ်ကြိုက်ပဲသဏ္ဏာန်လှီးဖြတ်ရဲ့ အာလူးချောင်း/ပြားကြော်နှင့်တွဲဖက်စားသုံးနိုင်ပါပြီ